Xildhibaan Beenebeene go’aan la gaaray maalin ka hor ku tilmaamay mid qorsheysan oo afduub ah | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Xildhibaan Beenebeene go’aan la gaaray maalin ka hor ku tilmaamay mid qorsheysan...
Xildhibaan Beenebeene go’aan la gaaray maalin ka hor ku tilmaamay mid qorsheysan oo afduub ah
Xildhibaan Maxamuud Beenebeene oo ka tirsan golaha shacabka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu isna uga hadlay go’aankii waqtiga loogu kordhiyay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Soomaaliya.
Xildhibaanka ayaa go’aankaas ku tilmaamay mid qorsheysan oo afduub ah, “Go’anadi shirkii 2-da guddi jogto ee May 25-keedii. waxuu ahaa go’ano qorsheysan oo afdub ah, waliba qodobo sharciga doorashada jabiyey. Guddonka ayaa fulsaday qorsho ay waten horayna looguso heshiiyey. Xubno kamid ah guddoonka iyo Madaxtooyada oo mudo korarsi kawada shaqaynaya” ayuu yiri Xildhibaan Beenebeene.
Guddiyada joogtada ah ee golaha shacabka ayaa kulan ay yeesheen 25-kii bishan, waxaa looga dhawaaqay waqti kordhin loo sameeyeen guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka, kaas oo la rabay in maanta oo ku beegan 27-ka bisha May uu hor yimaado xildhibaanada golaha shacabka.
Guddiga ayaa loo kordhiyay mudo hal bil, waxaana lagu balansanyahay in kulanka golaha shacabka ay hor tagaan 27-ka bisha dambe ee June, isla amrkaana ay ka horjeediyaan warbixin ku saabsan nuuca doorasho ee dalka ka dhici karta iyo waqtiga loo qorsheeyay.